Alahady fanateram-bokatra ho an’ny Sampana Fifohazana ny 25 marsa 2012 – FJKM Ambavahadimitafo Alahady fanateram-bokatra ho an’ny Sampana Fifohazana ny 25 marsa 2012 |
Alahady fanateram-bokatra ho an’ny Sampana Fifohazana ny 25 marsa 2012
Publié le 05 mars 2012 à 12:03
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Tompo.
Ny Sampana Fifohazana FJKM Ambavahadimitafo dia faly mampahafantatra anareo mpianakavin’ny finoana fa alahady fanateram-bokatra ho an’ny sampana ny 25 marsa 2012 ho avy izao. Ho fanamarihana izany dia :
1. hisy ny valopy vokatra izay ho zaraina ao am-piangonana amin’io andro io.
2. Hisy koa ny famelabelaran-kevitra (conférence) izay ho tanterahina ao am-piangonana ihany ny alahady hariva manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Ny loha-hevitra amin’izany dia ny hoe « FITAHIANA sy OZONA » izay ho tarihin’i Pasteur RAKOTOBE RAJAOMANJATO, mpitandrina ao amin’ny FJKM Ambohipo.
Koa manasa antsika mpianakavin’ny finoana handray anjara mavitrika amin’ny vokatra valopy izay entin’ny Sampana Fifohazana hanatanterahina ny asa sy andraikitra maro izay sahaniny mandritra ny taona, ary indrindra koa hanatrika io « conférence » io izay ampitombo hatrany ny fahalalana ho antsika kristianina.
Ny Biraon’ny SAFIF.